Sintomy maimaimpoana ny WhatsApp ho an'ny fitaovana rehetra | Androidsis
WhatsApp no ​​fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo malaza indrindra eny an-tsena, ary tsy izany ihany fa nanova ny fomba fifandraisantsika amin'ireo olon-tiantsika, amin'ireo namantsika ary amin'ireo manodidina antsika. Noho ny rafitra fampidirana azy miaraka amin'ny bokin'ny telefaona, nanjary nalaza toy ny afon'afo izy io, ka izany no mahatonga ny ankamaroan'ny mpampiasa, rehefa mahazo Smartphone vaovao, ny zavatra voalohany tadiavin'izy ireo dia ny misintona WhatsApp maimaim-poana, mba hahafahanao mifandray amin'ireo namanao haingana araka izay tratra.
WhatsApp dia mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny rafi-piasan'ny finday, ankoatr'izay misy kinova birao hahafahana mampiasa azy io haingana sy milamina. Ireo mpampiasa dia afaka mandefa hafatra, hafatra am-peo, sary, rohy amin'ny pejin-tranonkala, na fisie amin'ny endrika samihafa.
Iray amin'ireo safidy WhatsApp maro dia ny famoronana vondrona misy olona hatramin'ny 256, isa marobe. Ny fahafaha-mamorona sy mitantana azy ireo dia tsotra. Ny mpampiasa rehetra dia afaka mahazo azy ireo amin'ny alàlan'ny fanasana na amin'ny alàlan'ny fanampian'ny mpitantana.
1 Ahoana ny fomba fampidinana maimaim-poana ny WhatsApp
2 Sintomy ny WhatsApp APK
2.1 Dingana voalohany amin'ny fametrahana
3 Sintomy ny GBWhatsapp
4 Sintomy ny WhatsApp Aero
5 Sintomy ny WhatsApp mangarahara
6 Hanavao ny WhatsApp maimaim-poana
Ahoana ny fomba fampidinana maimaim-poana ny WhatsApp
Miaraka amin'ny fampianarana tsotra anay hampianatra anao hametraka WhatsApp izahay amin'ny fitaovanao rehetra, mba tsy hilaozana mifampiresaka iray miaraka aminao fotsiny:
Sintomy ny WhatsApp amin'ny finday Android
Sintomy ny WhatsApp ho an'ny takelaka
Tsy izany ihany fa manampy anao hametraka azy maimaim-poana izahay. Tsiahivinay fa taorian'ny nahazoany azy tamin'ny Facebook, ny orinasa WhatsApp Inc dia nanafoana ny karazana fiampangana amin'ny fampiasana ny serivisy, noho izany Maimaimpoana tanteraka ny WhatsApp.
Ny pejy WhatsApp ofisialy dia mamela ny fampidinana ny kinova farany an'ity fampiharana malaza ity izay efa manana mpampiasa maherin'ny 2.000 tapitrisa manerantany hatramin'ny nanombohany. Androany dia hasehontsika anao ny fomba fampidinana sy fametrahana azy amin'ny fitaovana Android amin'ny dingana vitsivitsy.
Ho alaina hiditra amin'ny pejy WhatsApp izahay ary hiditra amin'ny kinova Android platform isika, tsindrio ny Download Now ary afaka segondra vitsy dia ho hitantsika ao anaty fampirimana fampidinana an-tariby ho an'ny fametrahana manaraka izany.
Raha te-hametraka dia tokony havelantsika hapetraka ny APKs noho ny fiarovana ny rafitra fandidiana. Mba hanaovana izany, hiditra amin'ny "Security" isika ary hampandeha azy amin'ny loharanom-baovao tsy fantatra, hampandre anao i Google fa iharan'ny zava-misy ianao fa tsy mety ny fandehany, fa tadidio fa ny fampiharana APK dia ilay natolotry ny Google ihany. Play Store.
Raha vantany vao nahavita ity dingana ity ianao dia andramo sintonina indray ary avelany hiasa tsy misy olana.
Dingana voalohany amin'ny fametrahana
Vantany vao alaina, dia miroso amin'ny fametrahana ny APK amin'ny findainay izahay. Miseho eo amin'ny biraon'ny fitaovana ilay kisary fampiharana, kitiho eo amboniny mba handrindrana azy ary handefasanao hafatra amin'ny lisitry ny fifandraisana.
Vantany vao misokatra izy dia tsy maintsy manaiky ny fepetra amin'ny serivisy isika, kitiho ny hanaiky ny dingana manaraka.
Hamarino ny nomeraon-telefaonanao. Handefa PIN anao izy ireo izay hiditra ho azy. Tsindrio OK na Manaraka.
Raha manana nomaniny ho solon'izay teo aloha ianao ary te hamerina azy io dia safidio ny Restore, raha tsy izany dia esory ity dingana ity.
Farany, ampidiro ny anaranao na ny solonanaranao hahafantaran'ny olona anao. Azonao atao ny manova ny anarana imbetsaka araka izay tadiavinao ao amin'ny Fikirakirana ny fampiharana aorian'izay, noho izany aza matahotra ianao raha diso ny nampidirinao azy.
Raha vao tafiditra ny anarana na solon'anarana ianao dia afaka mifanakalo hafatra amin'ny namana na olom-pantatra.
Sintomy ny GBWhatsapp
GBWhatsApp dia iray amin'ireo mody WhatsApp tsy ofisialy malaza indrindra ho an'ny Android. Anisan'ireo fanatsarana azy ny fiasa vaovao sy ny fiasa fanampiny miaraka amin'ny fametrahana azy ihany. Tsotra ny fametrahana azy ary afaka minitra vitsy isika vao hampiasa azy.
Anisan'ireo fiasa misy azy ny fahaizana manafina resaka amin'ny tsindry tsotra. Safidy iray hafa dia ny fahaizana mandefa hafatra hatramin'ny olona maherin'ny 600 avy amin'ny lisitry ny fifandraisana miaraka. Ny mod dia mamela antsika ihany koa hijerena ireo sary sy horonan-tsary nefa tsy mila misintona izany amin'ny fitaovantsika.
Izy io dia manana endri-javatra tsy misy farany, izy io dia iray amin'ireo mods tsara indrindra azonao andramana ary ahafahanao manararaotra ireo fiasa fanampiny ampidirin'ny mpandrindra.
WhatsApp Aero dia iray amin'ireo mods izay nijanona rehefa nandeha ny fotoana. Ny fametrahana dia maneho fiovana lehibe, ambonin'izany rehetra izany dia manasongadina ny estetika ary manome valiny kalitao. Manana fiasa mitovy amin'ny an'ny hafa izy io, saingy miavaka amin'ny fanaingoana tanteraka ny rindranasan'ny WhatsApp raha vao apetrakao.
Anisan'ireo fiasa hafa azonao fantarina hoe iza no olona nitsidika ny piraofilinao, manafina ny fampandrenesana amin'ny manga ny hafatra vakiana amin'ny resaka, manova ny endritsoratra ao amin'ny taratasin-dresakao, manafina ny satan'ny Internet, ankoatry ny safidy hafa
Anisan'ireo asa lehibe sy fampiasa misy:
Fanaraha-maso bebe kokoa ny safidinao manokana
Mety hisintomana lohahevitra vaovao
Safidy misimisy kokoa amin'ny fisintomana rakitra
Rohy fampidinana: Sintomy ny WhatsApp Aero
Sintomy ny WhatsApp mangarahara
WhatsApp mangarahara dia mod izay miorina amin'ny fampiharana WhatsApp ofisialy. Izy io dia ahafahanao manamboatra mora foana ny interface iray manontolo ary misy safidy fanampiny azo alaina rehefa apetrakao ny kinova farany. Azonao atao ny mijery ny sary an-tsoratry ny telefaona ho toy ny interface na manamboatra azy hampiseho sary hafa anao.
Araka ny tondroin'ny anarany, Transparent WhatsApp dia manatsara ny fampiasana ny fampiharana ary tsy hampiadana ny fitaovana. Manampia emoticons sy emojis vaovao maro hahafinaritra kokoa ny resakao. Anisan'ireo asa lehibe manasongadina ny fahafahanao mandefa rakitra hatramin'ny 1 GB na mihoatra ny sary 100 na indray mandeha.
Hanavao ny WhatsApp maimaim-poana
Ny tranga mitovy amin'izany dia mitranga amin'ny fanavaozana ny WhatsApp, angamba, satria efa ela ianao no tsy nanavao ny kinova WhatsApp, mangataka anao hanavao ny serivisy ny fangatahana, na izany aza., ahora manavao WhatsApp dia maimaim-poana mandrakizayNoho izany, tsy mila manavao ny kaontinao WhatsApp ianao amin'ny fandoavana vola hahafahana mampiasa azy io foana. Raha toa ka mangataka fanavaozana ny fangatahana dia tokony hifandray amin'ny mpamatsy anao ianao havaozy whatsapp, na amin'ny alàlan'ny Google Play Store na avy amin'ny Apple App Store. Tsy dia mora sy mora toy izany ny mampiasa WhatsApp toy ny ankehitriny, koa araraoty.